Baolina kitra – “CAN 2021” : Nomontsanin’ny Barea tanteraka i Nizera • AoRaha
Nibata fandresena niezinezina ny Barean’i Madagasikara. Nandohalika tan­teraka teo anatrehan’ny eki­pam-pirenena malagasy taranja baolina kitra, tamin’ny isa 6 noho 2 ny Mena avy any Nizera, tao amin’ny kianjan’i Seyni Kountché tany Niamey, nandritra ny andro faharoan’ny fifanintsanan’ny vondrona K amin’ny fiadiana ny tapakilan’ny Can 2021. Sambany teo amin’ny tantaran’ ny baolina kitra no nanafika tany an-tanin’olona, ka naha­faty baolina enina ny ekipam-pirenena malagasy. Teto Mada­gasikara no nahavitan­tsika nandresy tamin’ny elanelan’isa lavitra dia lavitra, 6 noho 0, tamin’ny lalao nihaonana tamin’i Seychelles (30 aogositra 1990). Saika ireo mpampiantrano no manamon­tsana antsika hatrizay.
Niraradraraka ny oram-baolina nampidirin’ireo mpilalao malagasy, tamin’ity fanafihan’ny Barean’i Madagasikara ny Mena tany Nizera ity. Nanjary feno fahatokisan-tena izy ireo tamin’ity lalao ity satria teo amin’ny fizaràm-potoana voalohany dia efa nahatafiditra baolina efatra sahady tamin’ny alalan’i Lalaina Nomenjanahary na i Bolida (9’, 25’) sy Abel Anicet (Pen 35’) ary Carolus Andriamahitsinoro (38’). Ny mpampian­trano anefa no namono ny baolina voalohany tamin’ny alalan’i Mohamed (4’).
Niampy izany isa izany teo amin’ny fizaràm-potoana faharoa tamin’ny baolina matin’i Voavy Paulin (54’) sy Jeremy Morel (64’). Io no baolina voalohany matin’ity vodilaharan’ny Stade Rennais ity tao amin’ny ekipam-pirenena malagasy.
Nilalao tsy nisy tsindry mihitsy ireo mpilalaon’ny Barea saingy isan’ireo mbola lesoka ny fitazomana
mpilalao mpifanandrina, indrindra amin’ny daka apetraka. Nanjakazaka ihany koa anefa ny ekipam-pirenena Malagasy teo amin’ny fitazo­mam-baolina, izay nahatratra 60% raha 40% ny an’i Nizera. “Hilalao tsy misy tsindry
izahay. Efa tsara ny fanombohana tamin’i Etiopia ka mila tohizana izany”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea talohan’ny lalao.
Nanantena mafy ny hahazo ny isa telo ny Mena tamin’ity lalao ity, talohan’ny lalao, saingy diso fanantenana. “Hiezaka ny haka ny isa telo izahay rehefa tsy nahazo izany tany Côte d’Ivoire”, hoy i Jean-Guy Wallemme, mpana­zatra an’i Nizera, talohan’ny lalao.
Miha manatona an’i Kamerona
Lalao isan’ireo tena ian­kinan’ny fahatafitantsika ho any Kamerona ny fihaonana amin’i Côte d’Ivoire, mandroso sy miverina, amin’ny volana aogositra sy septambra 2020 ho avy izao. Na teo aza ny fitavozavozan’ny Elefanta Ivoariana, isan’ireo kalaza aty Afrika, tamin’ireo lalao roa nataony ka tsy nahazoany afa-tsy isa telo, dia tsy azo ambaniana izy ireo. Mbola lava rahateo ny fotoana hoentin’ izy ireo manarina ny fahavoa­zany. Isan’ireo lesoka ho antsika ny eo amin’ny vodilaharana, izay matetika no songonan’ ireo mpilalao lava mifanan­drina amintsika. Raha mahazo isa telo amin’ireo lalao roa ireo, fahafahakeliny i Madaga­sikara dia efa naman’ny tafita ho any amin’ny CAN 2021. Na izany aza anefa dia mila miatrika lalao ara-pirahalahiana ny Barea raha te ho tafita.
Miankina amin’ny mpitantana sy ny fanjakana ny hanomezana izay fomba rehetra hiverenana indray amin’ny dingan’ny famaranan’ny CAN.
Baolina kitra – «CAN 2021» :: Manahy ny lalao amin’i Nizera i Nicolas Dupuis
Baolina kitra – « UFFOI U15 » :: Hiady laharana fahatelo amin’ i Maorisy i Madagasikara